लक्ष्मी प्रसाद प्रसाई, रानीपुल, पुर्व सिक्किम
ज्यान जोखिममा पार्नु थियो । तर आँट गरेर भागेपछि तिनको कदम स्पलानेड बसपार्कमा रोकिए । सिलगुड़ी आउने बस हिड़्नै आटेको थियो । सट्ट पसेर बस संचालकसँग बिन्ति गरिन् । ‘म सँग बस भाडा तिर्ने पैसा छैन । म पुगेर दिन्छु ।’
बस संचालक भन्छ-सिलगुड़ीमा तिम्रो घर अथवा को छन र भाडा दिन्छन् ?
उनी भन्छीन्– कोहि छैन तर, मेरो नेपाली जाति छन् म मागेर दिन्छु । कत्रो भरोसा उनको जाति प्रति । हुन त तिनलाई त्यहाँ पुर्याएर बेच्ने दलाल पनि आफ्नै जातिनै थियो । तर उनलाई सबै एउटै हुँदैन भन्ने विश्वास थियो । यो सुनेर बसवाला हिन्दी बंगाली मिसाएर ‘हुँदैन ! म पैसा कन्र्फम नभएको सवारी नलाने’ भन्दै तर्क गर्न थाल्यो ।
ती दुई बिचको संवाद सुनिरहेको । बसको पछिल्लो सिटबाट एक सज्जन व्यक्ति उठेर आई बसवालाको हातमा दुई हजार थमाई दिए अनि -‘आउनु होस् पछि सिट खाली छ’ भनेर लगे । अनि ति महिलालाई बसाए । धेरै कृतज्ञता आभार जनाउदै ति महिलाले रूदै भनिन्–‘हजुरले आजीवन तिर्न नसक्ने गुण लाउनु भो । म बेचिएको ठाँउबाट ज्यान बचाएर भागेकि हुँ ।
ति भद्रमान्छेले भने–तिम्ले आफनो नेपाली जातीमाथि कत्रो विश्वास गरेउ । सिलगुडीमा जातीसँग मागेर दिन्छु पनि भन्यौ ! म पनि नेपाली हूँ । यहाँबाट काम छोड़ेर आफनो ठाँउ आसामतिर लागेको अब उतै काम गर्छु । अनि तिमीनी ?
उनले आफ्नो परिचय दिँदै भनिन्–म पश्चिम नेपाल कि, म आमा बाबा बिहिन थिए । आफन्तकोमा हुर्किए । पछि एक जनासँग बिहे भयो । उसैले मलाई यहाँ पुर्यायो ।
गफैगफमा रातभरिको बसको यात्रा सकियो । तर मन बहादुर र मनमायाको यात्रा भने आसामको चिया बगानमा जारी छ । उनीहरुका एक छोरो एक छोरी छन् ।